xafiiska Nairobi – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Author Archives: xafiiska Nairobi
January 1, 2017	Leave a comment 39 Views
Dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay Go’aanka Kenya ee Qaxootiga ku saabsan
November 17, 2016	Leave a comment 31 Views
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay Go’aankii Dowladda Kenya ay ku Hakisay soo celinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Xerada Dhadhaab. Kulan ay wada qaateen Wasiirka Arrimaha Gudaha Dalka Kenya Joseph Nkaissery , Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey iyo Danjiraha Dowladda Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa ay kaga hadleen arrimaha Qaxootiga. Wakiilka ...
Toogasho Sababtay Khasaare Nafeed oo ka dhacday Xarunta Doorashada ee Cadaado
November 17, 2016	Leave a comment 33 Views
Askari ka tirsan Ciidanka Ilaaliya Xarunta Doorashada Magaalada Cadaado ee Maamul Goboleedka Galmudug ayaa Toogasho ku Dilay Nin la sheegay inuu ka soo horjeeday Qaabka loo soo xulay Ergada Beeshiisa. Ninka la dilay ayaa la sheegay inuu Uleeyay dhimashadiisa ka hor Qaar ka mid ah Ergada ay isku haybta yihiin iyo Ciidanka Xarunta ilaalinayay intaba. Goobjoogeyaal ayaa Noo Xaqiijiyay in ...
Wajiga 1aad ee doorashada Aqalka Hoose oo maanta ka bilaabaneysa Jowhar
Wajiga koowaad ee doorashada Kuraasta Aqalka Hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabaneysa magaalada Jowhar, iyadoo illaa 13 kursi lagu tartami doono. Guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo maalin ka hor soo gudbiyay shaxda ay u dhaceyso doorashada Aqalka Hoose ayaa wajiga koowaad ku soo bandhigay kuraasta 13 qabiil oo ay Musharaxiintooda ku ...
November 15, 2016	Leave a comment 73 Views
Ururka Alshabaab oo la dagaalamaya dowlada federalka iyo ciidamada taageera ee AMISOM ayaa dhowaan waxa ay la wareegayeen deegaano ka mid ah gobolada dalka kadib markii ay ciidamadii Ethiopianka ahaa ee halkaa joogay ay isaga baxeen. Degmooyin ku yaal gobolada Hiiraan iyo Bakool ayaa kamid ah deegaanada ay ciidamada Ethiopia ka baxeen. Hase yeeshee waxaa dhowaan booqday deegaano kamid ah ...
Galmudug oo beenisey in la wareeray Xarunta Doorashada Cadaado
November 15, 2016	Leave a comment 42 Views
Shalay Ciidamada Ammaanka Maamulka Galmudug waxaa ay Xabsiga dhigeen Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Galmudug Maxamed Maxamuud Guure iyo Saddex Qof oo kale islamarkaana uu ku jiro Nin Nabaddoon ah. Saraakiisha Amniga Galmudug ayaa sheegay in Sababta loo xiray Wasiir Guure iyo Ragga la socda ay aheyd Shaqaaqo ay Ilaalada Wasiirka Howlaha Guud ka sameeyeen xarunta Doorashada Magaalada ...
Muxuu qaban doonaa Obama kadib shaqada Aqalka Cad
November 15, 2016	Leave a comment 44 Views
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday ee dalka Mareykanka ayaa Wareysi uu kal hore bixiyay kaga hadlay shaqada u qorsheesan in uu qabto marka uu xilkiisa dhamaado kana baxo Xafiiska Aqalka Cad ee dalka Mareykanka. Bracak Obama ayaa sheegay marka uu ka baxo Xafiiska Aqalka Cad bisha Janaano ee sanadka soo socda in uu qorsheenayo in uu noqdo Taksiile uuna doonayo in uu ...
Gaas iyo Guuleed oo Guddi u xilsaaray Dhameystirka Xalinta Colaada Gaalkacyo
November 14, 2016	Leave a comment 45 Views
Kulankan oo shir gudoominayey Cumar C/rashiid Cali Shaarmarke ayaa waxaa lagu ansixiyey guddi ka kooban 18-xubnood oo labada dhinac ah. waxaana gudigan loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan nabadaynta iyo ilaalinta xabad joojintii lagu dhawaaqay. Kulanka waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Madaxweyanaha Puntland iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug iyo masuuliyiin kale. Ra’iisal Wasaaraha ...
Banaanbaxyo Roob doon ah oo Maanta Muqdisho ka dhacaya
November 14, 2016	Leave a comment 41 Views
Maanta ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho ay ka dhacaan Isku soo baxyo waaweyn oo Dadku ay ku dalbanayaan in Alle uu siiyo Raxmadiisa,waxaana Banaanbaxyada qaarkood ay ka dhici doonaan Masaajidka Isbaheysiga Islaamka. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta iyo Culimada Soomaaliyeed ee Magaalada Muqdisho ku nool ayaa Maanta oo Isniin ah 14-11-2016 Cilaamiyay in ay dhacaan Banaanbaxyo Roobdoon ah,maadaama dalka ...
DEG DEG: Ciidanka Dowladda Soomaliya oo lawareegay Tiyeeglow
November 14, 2016	Leave a comment 43 Views
Wararka naga soo gaaraya Degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay la wareegeen Gacan ku haynta Degmada Tiyeeglow. Tiyeeglow waxaa Mudo Bil kabadan Maamulayey Xarakada Al-shabaab ka dib markii Ciidamada Itoobiya ay Faarujiyeen Degmada. Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay in Ciidamada Gacanta ku dhigay Tiyeeglow ay Dagaal la’aan kula wareegeen Magaalada ka gadaal ...